Izay tsy vonona, maka sisiny… | NewsMada
Izay tsy vonona, maka sisiny…
Nahoana moa no misy anjatony maro ny antoko politika lazaina fa ara-dalàna eto, kanefa zara raha misy ny filatsahan-ko fidina voaray? Nampanontany tena ny ankamaroan’ny mpanaraka ny vaovao politika mihitsy io. Tsy ampy ve ny fotoana niomanana? Angamba tsy dia izay loata, satria efa fantatra fa isaky ny efa-taona ny fifididiana ho ben’ny Tanàna, isaky ny dimy taona ny fifidianana solombavambahoaka sy ny filohan’ny Repoblika.
Fa dia io ny zava-misy… Tamin’ny fe-potoana farany nomena, zara raha nisy ny antontan-taratasy filatsahan-kofidina, ary maro ireo kaominina tsy nisy kandidà. Tao anatin’ny fanalavam-potoana vao feno izany. Rehefa tena dinihina, adin’ny antoko na vondron’antoko roa ihany no tena misy izao.
Vondron’antoko miaraka amin’ny filoha Rajoelina, an-daniny, ary ny Tim sy ireo antoko mpiara-dia aminy, an-kilany. Ny ankamaroan’ireo tsy miankina kosa dia saika ireo tsy voafidy ho lohalisitra tany amin’ireo vondron’antoko ireo.
Tsy resahina ireo antoko politika efa matoatoa hatramin’izay. Toa misy sy malaza ny anarana, kanefa tsy misy na olona iray sy ny fianakaviany ihany no mpikambana ao. Mba nahagaga ny maro kosa ny tsy nahatazanana ny antoko politika nanana ny tanjany, toa ny HVM. Nanana ny ankamaroan’ny Ben’ny Tanàna teto Madagasikara izy ireo. Nanana solombavambahoaka maro ihany koa, na dia avy amina antoko hafa aza no niofo ny sasany. Nankaiza daholo ireo mpanao politika tao amin’ity antoko ity?
Misy ny stratejia politikan’ny antoko tsirairay, angamba ao anatin’izany izao fanginan’ny antoko sasany izao. Enga anie, satria raha tsy amin’izao vanim-potoana izao no mipoitra sy miseho, tsy tokony hanana anjara fitenenana intsony amin’ny tohin’ny raharaham-pirenena…